Intsebenziswano entsha yeVimeo kunye nezixhobo zokudibanisa ziyiseka njengeMigangatho yabaFundi beVidiyo | Martech Zone
Intsebenziswano entsha kaVimeo kunye nezixhobo zokudibanisa ziyiseka njengeMigangatho yabaFundi beVidiyo
NgeCawa, ngoFebruwari 26, 2017 NgoLwesihlanu, Septemba 29, 2017 Douglas Karr
Enye yeenkampani ezingabamelwane ekwakheni istudiyo sethu zezinye zeemiboniso bhanyabhanya ezintle, Qeqesha 918. Benza ngokukodwa ekuziseni izixhobo zabo naphina emhlabeni kunye nokuvelisa iividiyo eziyindumasi. Ayisiwo nje umgangatho womsebenzi abawuvelisayo omangalisayo, nangona kunjalo. Bachitha ixesha labo elininzi bekhulisa ibali, beliguqula libe yimiboniso, emva koko bacwangcise iiprojekthi zabo ngokungenakulunga. Iziphumo ziyaxhalabisa… Nazi ezinye iisampulu ngeNkampani yeReel yabo:
Ndidibene nomnye wabasunguli kwaye bendithetha naye malunga nezixhobo abazisebenzisayo ukwenza amaqabane asebenzisane okanye abathengi baphonononge umsebenzi wabo. UYoshuwa wayibonisa loo nto bedlala bebesandula ukwandisa izixhobo zabo, bebabonelela ngayo yonke into abayifunayo. Eyokuqala yayiyiphepha lokuphononongwa kwevidiyo elenza abavavanyi ukuba bamakishe amaxesha kunye namanqaku kwaye baxoxe ngapha nangapha kuyo. Okwesibini yayikukudityaniswa ngokuthe ngqo kunye neAdobe Premiere Pro eyenza ukulayishwa ngokuthe ngqo kwiVimeo.
Amaphepha oVavanyo lweVidiyo
Ukuphonononga kunye namaNqaku okuBambisana Ababuyekezi banokucofa ngokuthe ngqo nakweyiphi na isakhelo ukushiya inqaku elinekhowudi. Xa ucofa inqaku, uzitsiba ngokuzenzekelayo kwisakhelo esisekunene.
Yabelana nabaHloli abangenamkhawulo -Khusela ngokukhuselekileyo ikhonkco lokujonga iphepha labucala nakubani na-nokuba akakho kwiVimeo.
Landela inkqubela yakho -Phendula ngexesha lokwenyani, okanye ujike amanqaku ukuba enze izintlu zokwenza uvuselelo lwevidiyo yakho lube lula kunakuqala.
Iphaneli yeVimeo yeAdobe Premiere Pro
The bedlala Iphaneli ye I-Adobe Premiere Pro ivumela amagcisa emveliso yevidiyo ukuba enze lula ukuhlela kwabo ukuhamba komsebenzi ngokubonelela ngeendlela zokulayisha ngokulula ividiyo yabo ngqo kwisoftware. bedlala I-PRO okanye amalungu oshishino angenza amaphepha okujonga kwakhona kwiphaneli yasimahla. Iimpawu zibandakanya:
Ngenisa iiVidiyo kwangoko -Thumela iividiyo zakho ngqo kwi bedlala iakhawunti, khetha useto lwangasese njengoko ugcwalisa, ungenisa useto lwakho lokuseta ngokwezifiso, nokunye okuninzi.
Gcina ixesha leMveliso -Gxila emsebenzini wakho kwaye wenze lula ukuhamba kwakho ngokufaka iividiyo kunye nokwenza iphepha lokujonga ngaphandle kokushiya iPremier Pro.
Khuphela iPhaneli yeVimeo yeAdobe Premiere Pro
Ukubhengezwa: IMartech yi Ukudibana kweAdobe kwaye bedlala umanyano. Sisebenzisa amakhonkco ethu okudibana kweli nqaku.
tags: zodakaInkulumbuso ye-adobe proIiVidiyo zeNtengisoiphambili prointsebenziswano yevidiyoukuhlolwa kwevidiyobedlalaiphepha lokujonga kwakhona i-vimeo
I-PaveAI: Umntu othile ekugqibeleni uzifumene iimpendulo kuGoogle Analytics!
Hee Doug, ndizamile ukwabelana ngolu lwazi kwiqela lezorhwebo elenza iifilimu kuFacebook, kodwa lizinzisa njengevidiyo. Okubi kakhulu, ayizukudlala xa ucofa kuyo. Inqaku ngokwalo aliyi kudibanisa okanye libonise.
UFacebook awudlali kakuhle nakubani na!
Okt 25, 2021 ngexesha 8:52 AM
Andikwazanga ukuxelela kwinqaku lakho kwaye andinakufumana nantoni na yokuqinisekisa okanye ukukhanyela kwindawo yeVimeo, kodwa ngaba uyazi ukuba kunokwenzeka ukuvumela umntu wesithathu ukuba akwazi ukubonelela uhlobo oluthile lojongano lokulayisha iividiyo kwi-akhawunti yakho yeVimeo endaweni yokufakwa ngumnini-akhawunti?
Ndicinga ukuba eyona meko imbi kakhulu ungasebenzisa inkonzo yokudlulisa iifayile njengeWeTransfer ukufumana ifayile yevidiyo kwaye uyilayishe ngokwakho kwiakhawunti yeVimeo ukuqalisa ukusebenza ngokubambisana.
Oktobha 25, 2021 ngo-2: 48 PM
Inokwenzeka - iVimeo ine- layisha API. Kananjalo banayo a isixhobo sentsebenziswano enokusetyenziswa phambi kokupapasha ividiyo ukwabelana nokuqokelela ingxelo ngayo.